Indlu yeeNdwendwe kaGrowe - kanye njengekaMakhulu!
Ikhaya lethu elihle labucala liyafumaneka kuwe! Singathanda ukuba ufumane uxolo kunye nokuzola esikonwabelayo kakhulu. Siza kuphendula zonke izicelo KUNGEKUDALA, sinethemba lokuba siya kukwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho. Yiza; yiba lundwendwe lwethu; ubusuku, iveki, okanye inyanga!
Yiza uphumle kwaye ukhulule. Yonwabela ukubasa umlilo kwisitovu seenkuni ebusika, okanye uqokelele ujikeleze umgodi wangaphandle ehlotyeni. Gcoba ngencwadi okanye uvule ibhotile yewayini kwaye wenze iinkumbulo nosapho okanye abahlobo. Iiholide zezokutshintsha kwesantya, kwaye isantya apha asikhawulezi kwaye sicotha. Eli khaya linemigangatho emibini linika amagumbi ama-3 lilinye elinebhedi yokumkanikazi, igumbi elinye elineseti yeebhedi ezingamawele, zonke kumgangatho wesibini. Igumbi elinye elinelinye lingaphaya komgangatho wokuqala wokuhlambela. Ngokungena komoya omkhulu womnqamlezo, kunye nomthunzi, iA/C iyafumaneka, kodwa ayifane ifuneke!
Ifakwe ibhloko enye ukusuka kwiNew Holstein Aquatic Centre kunye nepaki enkulu yoluntu, iGrowe's Guest House inokufikelela kwangoko kwiihupu zebasketball kunye nendawo yokudlala yabantwana. Indawo yokuhlala ikwindawo yokuhlala ETHULE, inecawe esekupheleni kwebhloko enye kunye nekhaya labalupheleyo ekupheleni kwenye. Owu!.. kusenokubakho ukugcwala kancinci ngeCawe kusasa!
Kancinci okanye kakhulu njengoko ukhetha. Ikhaya lethu liba likhaya lakho. Unofikelelo olupheleleyo kunye nobumfihlo. Inkonzo yokuhlamba impahla kabini/ngeveki iyafumaneka. Isitiya esilinywe ngokulungeleleneyo kwipropathi ukuze sibe singqonge ukhula! ...Kodwa konke malunga nemfihlo yakho.
Kancinci okanye kakhulu njengoko ukhetha. Ikhaya lethu liba likhaya lakho. Unofikelelo olupheleleyo kunye nobumfihlo. Inkonzo yokuhlamba impahla kabini/ngeveki iyafumaneka. Isitiya…